Brake Caliper Disc - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Kedu ọrụ nke breeki diski?
Ọrụ nke breeki diski n'ime ụgbọ ala bụ ịchịkwa ọsọ nke ụgbọ ala ka o wee nwee ike ịgba ọsọ ma kwụsị dịka ọchịchọ onye ọkwọ ụgbọ ala si dị.breeki diski ga-eme ka onye ọkwọ ụgbọ ala nwee nchekwa na njikwa ụgbọ ala.
Ọtụtụ ụgbọ ala na-eji brek brek ma ọ bụ breeki drum, ma ugbu a, a na-eji breeki diski arụ ọtụtụ ụgbọ ala.A na-eji breeki diski eme ihe n'ụdị ụgbọ ala dị iche iche, ma ọ bụ n'ihu ma ọ bụ n'azụ ụgbọ ala.
Ndị na-emepụta ụgbọ ala ejirila ụma gbanwee sistemu breeki ka ọ bụrụ brek diski n'ihi na ha dị nchebe ma nwee ike ime ka ụgbọ ala kwụsie ike, ọbụlagodi mgbe ejiri ya na nnukwu ọsọ.Usoro nke ịkwụsị ụgbọ ala dị mma karịa mgbe ị na-eji breeki diski karịa brek ma ọ bụ drum.
Iji kwụsị ụgbọ ala ahụ, n'ezie, ị chọghị ebe dị anya dị ka square, na site na iji breeki diski, ụkwụ niile nke ụgbọ ala nwere ike ịkwụsị ngwa ngwa.N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, breeki diski nwere ike ime ka ebe breeki dị mkpụmkpụ.Site na breeki diski, nchekwa nke ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-adị mma n'ime ụgbọ ala.
Iji ụgbọ ala jiri breeki diski, ị ga-adị jụụ ma nwee ntụkwasị obi.
Kedu ihe bụ Caliper Brake Disk?
Ndị na-ahụ maka diski breeki na-arụ ọrụ dị mkpa n'ikike gị iji nwayọ ma ọ bụ kwụsị ụgbọ ala gị n'ọsọ.Caliper ọ bụla na-arụ ọrụ site n'itinye nrụgide na breeki pads mgbe ị na-agbada na pedal gị.Nke a na-amanye pads megide diski.Nke a na-emepụta ọkwa dị elu nke nguzogide dị mkpa iji mee ka wiil gị kwụsịlata.Calipers brek na-eyikarị oge site na iji izugbe.calipers dị ala ga-eyi ga-adị ngwa ngwa karịa ka ọ dị.Mgbaàmà nke calipers eyighị agụnye ụda na-ada ụda na mmetụ ahụ mgbe a na-agba breeki.Ebe ụdị breeki ọ bụla na-arụ otu ọrụ, ha niile abụghị otu.
Ndị calipers brek na-arụ ọrụ igwe iji kụchie eriri breeki na diski ahụ.A na-akpọkwa calipers dị ka breeki na breeki piston.
Ihe nrịbama breeki ga-arụ ọrụ site na iji nrụgide hydraulic na-emepụta site na mgbanwe nke mmiri mmiri breeki nke na-abanye na eriri breeki ma ọ bụ eriri.Ịkwesịrị ịma ma ọ dịkarịa ala ụdị abụọ nke breeki calipers, ya bụ ndị na-ese n'elu mmiri na ndị edoziri.
Caliper na-ese n'elu mmiri bụ otu n'ime breeki calipers nke ọnọdụ ya dị na ngalaba caliper nkwado breeki.Ụdị caliper a ga-emecha gbanwee wee gaa n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri.Na calipers na-ese n'elu mmiri, piston breeki dị naanị maka otu akụkụ.Mgbe piston na-aga, ụgbọ ala ahụ na-akwali breeki diski.Akụkụ nke ọzọ ga-akụgide eriri breeki n'akụkụ ya.
Akara caliper edoziri bụ caliper onye ọnọdụ ya jikọtara ya na breeki nkwado caliper na nke a na-eme ka caliper ka na-arụ ọrụ iji gbochie breeki mpe mpe akwa, ya bụ naanị breeki piston.
Isi ihe nke breeki Caliper
Mebere caliper breeki nwere ọtụtụ akụkụ niile dị mkpa na arụ ọrụ nke ọma nke sistemu breeki.Akụkụ ndị a na-agụnye caliper na ihe nrịba elu, ntụtụ slide, bolts mkpọchi, akpụkpọ ụkwụ uzuzu, obere breeki na-arị elu, breeki na shims, piston breeki nwere akpụkpọ ụkwụ uzuzu na akara.
A na-ete ihe atụ ndị a mmanụ ma na-enye ohere maka itinye caliper nke ọma na rotor breeki ma ka na-enye ohere maka mmegharị achọrọ n'okpuru ịnya ụgbọ ala nkịtị.
Enweghị ike iwepụ ihe nkwado na-arị elu na diski diski ụgbọ ala n'ihi na a na-eji ihe nkwado caliper na-ejikọta caliper, nke ga-edobe caliper na ebe agaghị agagharị.
A na-edobe breeki piston n'ime c aliper, dị ka tube nwere njedebe oghere.breeki piston na-arụ ọrụ iji pịa ma ọ bụ ịkwanye mkpuchi breeki na diski ka enwere ike iwetu ma ọ bụ kwụsị ntụgharị wheel.
Akara piston bụ otu akụkụ nke piston nke ejiri mmiri breeki mee, ya mere o nwere ihe ndị na-eguzogide okpomọkụ.Akara piston na-arụ ọrụ iji gbochie mmịpụta mmiri breeki nke nwere ike ịfe mgbe a na-apịnye lever.Akara piston nwere ike inye aka dọghachi piston azụ na azụ n'oge usoro breeki.
Mpempe mgbago brek
Emebere obere vidiyo ndị a ka ịkwapụ mpe mpe akwa na rotor.Nke a nwere ike idowe igwe nju oyi, belata mkpọtụ ma gbatịa ndụ nke mpe mpe akwa.Ihe mkpachị ndị ahụ dabara n'etiti mpe mpe akwa na rotor wee kwapụ pads ahụ na rotor.
A na-emepụta akara akpụkpọ ụkwụ uzuzu site na ihe na-agbanwe agbanwe ma nwee njedebe mbụ, nke na-etinye aka na njedebe nke cylinder.A na-enye akara akpụkpọ ụkwụ uzuzu iji gbochie mmiri, unyi na ihe ndị ọzọ na-emerụ emerụ ịbanye n'ime ebe ezumike dị n'etiti cylinder na piston.
breeki na-adọba ụgbọala (EPB)
Brake Parking Electric (EPB) bụ caliper nwere moto agbakwunyere (moto na caliper) na-arụ ọrụ breeki adọba ụgbọala.A na-achịkwa usoro EPB n'ụzọ eletrọnịkị ma mejupụtara mgba ọkụ EPB, EPB caliper, na ngalaba njikwa eletrọnịkị (ECU).
Breek na-adọba ụgbọala eletrik ma ọ bụ EPB bụ ụdị dị elu nke breeki ebe a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ breeki aka.Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-ezokwa aka na sistemu a dị ka 'Breeki Ịdọba Ọdụdọ Electronic'.Teknụzụ sistemụ a bụ akụkụ nke sistemu 'Brake by Waya'.
Isi ọrụ nke breeki na-adọba ụgbọala bụ iji zere mmegharị nke ụgbọ ala mgbe a na-adọba ụgbọala.Na mgbakwunye, breeki ndị a na-arụkwa ọrụ dị mkpa n'izere mmegharị azụ nke ụgbọ ala nke maliteghachiri ịkwaga na mkpọda.Na mkpokọta, breeki na-adọba ụgbọala na-arụ ọrụ naanị na azụ azụ nke ụgbọ ala.
Kedu ihe bụ onye na-adọba ụgbọala breeki?
A na-emepụta usoro breeki ebe a na-adọba ụgbọala (EPB) dị ka ụdị nke igwe eletrik eletrik, nke a na-eji ihe na-eme ihe na-edochi usoro ebe a na-adọba ụgbọala nke a na-emekarị iji mee ka ọ bụrụ ihe na-akụda ụgbọ ala.Ọ bụ usoro "motor-on-caliper" nke na-ejikọta actuator na caliper nke etinyere na azụ azụ ma na-arụ ọrụ Caliper ozugbo na-enweghị.
iche iche na-adọba ụgbọala cable.Ndị na-eme brek bụ ngwaọrụ na-agbanwe ike ikuku abịakọrọ n'ime ụgbọ ala ma ọ bụ ebe nchekwa ikuku nke ụgbọala na-adọkpụ ka ọ bụrụ ike igwe, nke na-eme ka breeki rụọ ọrụ."Ikuku ahụ na-esi na onye na-eme ihe, na-akpalite valvụ relay nke na-agbanwe ikuku ikuku ka ọ bụrụ ike breeki anụ ahụ.Onye na-adọba ụgbọala breeki ka a na-akpọkwa moto breeki na-adọba ụgbọala.
Kedu ka breeki na-adọba ụgbọala eletrik si arụ ọrụ?
A na-achịkwa usoro ahụ site na ụlọ ọrụ na-adọba ụgbọala eletrik.Mgbe mgbama ahụ bịara, moto eletrik na-arụ ọrụ na-atụgharị, a na-ebufe mmegharị a n'usoro ihe eji eme ihe site na eriri (belt pulley).Usoro ihe eji eme ihe a (igbe gear) na-ebelata ọsọ ntụgharị ma gbanwee mmegharị ntụgharị ka ọ bụrụ ịkwanye, na-ebugharị piston breeki na pads na brek na diski.
Mgbe braking na piston-pad na-ezu ike na diski ahụ, ebe ọ bụ na igwe eletrik ga-adọta ọtụtụ ihe dị ugbu a, a na-atụle mmụba a na ugbu a, n'oge a na-ebipụ ugbu a na usoro nkwụsịtụ.Ọ bụrụ na achọrọ ka emepee breeki ebe a na-adọba ụgbọala eletrik, a na-adọta pin nke na-ebuga piston n'ihu site n'ime ntụgharị ntụgharị ma hapụ breeki ahụ.
Mmụba na nrịba ụkwụ n'okpuru ọnọdụ nkịtị, pedal breeki gị kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma n'enweghị mkpa ike dị ukwuu iji dada pedal ahụ.Ka onye na-eme ihe na-amalite ịda, ị nwere ike ịhụ na pedal ahụ na-esiri ike ịpịa ma yie ka ọ chọrọ ike ka ukwuu iji daa mbà kpamkpam.
Teal breeki Calipers Jak Brake Caliper Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Caliper edoziri Caliper Saab Caliper eburu ọkara